९ किलो मात्रै सुन, ३१६ किलो मात्रै चाँदी भन्नु त्यो विश्वास गर्न लायक हो र ? होइन नि । कति हुनुपर्ने थियो अनुमानमा ? – " कञ्चनजंगा News "
९ किलो मात्रै सुन, ३१६ किलो मात्रै चाँदी भन्नु त्यो विश्वास गर्न लायक हो र ? होइन नि । कति हुनुपर्ने थियो अनुमानमा ?
No Comments on ९ किलो मात्रै सुन, ३१६ किलो मात्रै चाँदी भन्नु त्यो विश्वास गर्न लायक हो र ? होइन नि । कति हुनुपर्ने थियो अनुमानमा ?
काठमाण्डौ – सरकारले गठन गरेको पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले १० महिना लामो अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
२०१९ सालदेखि २०७५ सालसम्म अभिलेखित विवरणलाई आधार मान्दै तयार पारेको प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्र्तगत रहेको जग्गा तथा पशुपतिनाथ मन्दिरमा संकलन भएका सुनचाँदी तथा नगदका सम्बन्धमा उल्लेख छ ।
← पशुपतिनाथले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन ! हेर्नुहोस आजको राशिफल : → कञ्चनपुर र कैलालीमा आएको भीषण हावाहुरीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन,८७० घरधुरीमा क्षति